Home Wararka Madaxweynihii hore ee Sudan Cumar Al Bashir oo xukun lagu riday
Madaxweynihii hore ee Sudan Cumar Al Bashir oo xukun lagu riday
Madaxweynihii hore ee Dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa mar kale kasoo muuqday maxkamad xukunkeeda muran badan ka dhashay kadib markii ay isku soo baxeen dad badan oo isaga taageersan.
Maxkamadda Al-Bashiir oo ku bilaabatay jawi dagan ayaa mar qura isku badashay qeylo iyo khalalaaso kadib markii ay maxkamadda isku gadaameen taageerayaal badan oo qeylo billaabay markii uu Garsooraha ku dhawaaqi lahaa xukunka.
Waxay ku qeylinayeen in dacwadda ay tahay mid siyaasadeed, ka dibna garsooraha ayaa amray in ay ka baxaan maxkamadda gudaheeda, iyadoo arrintaas loo adeegsaday ciidamo tiro badan oo Boolis ah.
Murankaas kadib maxkamadda ayaa Al-Bashiir ku riday laba sano oo xabsi iyadoo lagu helay in uu galay dembi musuq-maasuq. Balse waxaa yaab lahaa in maxkamaddu sheegtay inay Al-Bashiir la geyn doonin xabsi caadi ah, balse lagu hayn doono xuran dhaqan celin ah.
Musuq maasuqa lagu helay Al-Bashiir ayaa waxaa ugu weyn $25 milyan oo dollar oo laga helay gurigiisa muddo yar ka dib markii xilka laga qaaday oo ay ciidamada Dowladda la wareegeen gurigiisa.
Al-Bashiir oo maxkamadda horteeda ka hadlayey ayaa sheegay in lacagta $25 milyan oo dollar ay aheyd hadiyad uu ka helay boqortooyada Sacuudiga, si gaar ah wuxuu u tilmaamay inuu ka helay Maxamed Bin Salman oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga.
Garoosraha Maxkamadda Al-Sadiq Cabdiraxmaan oo soo saaray xukunka ayaa yiri “Maxkamadda waxay dembi ku heshay Cumar Xasan Axmed Al-Bashiir, Maxkamadda waxay go’aansatay in ay u dirto xarun bulsho oo loogu talagalay daryeelka iyo dhaqancelinta oo laba sano lagu hayn doono.”
Bishii April ee sanadkaan 2019 ayey aheyd markii xilka laga tuuray madaxweyne Al-Bashiir kadib dibadbaxyo dhowr bilood ka socday jidadka waaweyn ee dalka Suudan.